Gaadiidka Shisheeyaha Oo Gaari Rakaab Ah Jiiray. – Calamada.com
Gaadiidka Shisheeyaha Oo Gaari Rakaab Ah Jiiray.
Kolanyo gaadiid ah oo ay leeyihiin ciidamada Kufaarta Afrikaanta waxey deegaanka Calamada ee duleedka magaalada Muqdisho ku jireen gaari Caasi ah oo dad shacab ah ay la socdeen.
Inta la xaqiijiyay waxaa shilkaasi sida ula kaca ah u sameeyeen ciidamada Kufaarta Afrikaanta ku dhintay inka badan shan ruux oo ka mid ah shacabkii gaariga Caasiga ah la socday’waxaa sidoo kale ku dhaawacmay inka badan 10 ruux oo shacab ah.
Gaariga Caasiga ah ayaa burbur xoogan uu soo gaaray’iyadoona kolanyada Kufaarta Afrikaanta goobta isaga dhaqaaqeen kadib markii xasuuqaasi geysteen.
Gaariga Caasiga ah ee ay la socdeen dadka shacabka ee gaadiidka Shisheeyaha jiireen ayaa ka yimid degmada Afgooye ee gobalka Shabeelada hoose isagoona kusoo jeeday dhanka magaalada Muqdisho iyadoona gaadiidka Kufaarta ee gaariga rakaabka jiiray ay ka baxeen magaalada Muqdisho.
Inta badan gaadiidka shisheeyaha ayaa caado ka dhigtay iney si ula kac ah u jiiraan gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale dadka shacabka ee wadooyinka Lugeynayo’iyadoona gaadiidka Kufaarta Afrikaanta goobta isaga dhaqaaqaan markii ay dhacdooyinkaasi naxdinta leh geystaan.
Previous: Faahfaahin Laga Helayo Dagaalka Degmada Qoryooley.
Next: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Degmada Guriceel.